ကူညီပါဦးဗျာ Epson T-11 resetter လိုချင်လို့ — MYSTERY ZILLION
ကူညီပါဦးဗျာ Epson T-11 resetter လိုချင်လို့
September 2009 edited July 2010 in File Request
ကျွန်တော့် Epson T-11 လေး Service Require ပြနေလို့ ဘယ်မှာ download ရမှတုန်းခင်ဗျား
ကျွန်တော်လည်းတွေ့တယ် download မရလို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတုန်း ပြောကြပါအုံးဗျာ
emptyman wrote: »
RS က တစ်ချက်ဆွဲလို့ရမလားကြိုးစားကြည့်ပါဦး... 3ပိုင်းခွဲထားတယ်..
3ပိုင်းလုံး ဆွဲပြီး rar ဖြည်မှအဆင်ပြေလိမ့်မယ် ..
source ကတော့ ... http://rapidog.com/reseter-epson-t11-rapidshare.html
ခင်လို့ စ တာနော်
.dmg fileကို window xp မှာopen ချင် လို. ကျေးဇူးပြုပြီး ကူညီပေးကြပါ။
incent6 wrote: »
dmg extension is mean of Disk Imaging file in MAC.
But , You can openadmg directly in Windows XP using TransMac ( http://www.asy.com ) but you can not install or run Mac software in Windows.
Download (or) http://www.asy.com/sharetm.htm
download မရဘူးဗျာ ရှိသေးရင်လည်း ပြောပြပေးနော်
.dmg ကို .exe အနေနဲ့ပြောင်း သုံးလို့ရတဲ့software မရှိဘူးလားအစ်ကို။convert လုပ်တဲ့သဘောပေါ့။နောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော် အခုသုံးနေတဲ့ PC ကို Mac OS တင်တာမရဘူးဖြစ်နေတယ်။Apple မဟုတ်တဲ့PC ကို Mac OS တင်လို့ရမရသိချင်လို့ပါ။
see this links and enjoy